Soo-saareyaasha Bacaha Qurxinta & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Baastada ee Shiinaha
Naqshad gaar ah oo qaas ah, adoo isticmaalaya agab tayo sare leh oo bay'ad PU ah, xulasho gudaha ah oo jilicsan oo jilicsan, heer sare, dabeecad sharaf leh. Waxaa jira qaybo badan oo gudaha ah, kuwaas oo ku habboon kaydinta fardaha, qoorta, bushimaha, garka, saacadaha, iwm.
Boorsada kiishashka kiishashka weelka dhoobada badan oo labajibaarane ah oo toos ah iibka bacda warshadaha
Qabanqaabiye isku-dubaridsan, sanduuqa kaydinta alaabada ee qurxinta safarka isku-dhafan ee la isku qurxiyo wuxuu ka samaysan yahay tayo aad u sareyso iyo jawi wanaagsan oo jawiga Oxford ah, taas oo ah iskudhiska-cadaynta, u-adkeysiga, u-jeexjeexa iyo fududahay in la nadiifiyo. Waxay ku habboon tahay safarka, gadaal u safashada bannaanka, duulista, kaamamka fasaxa, tagista barkadda dabaasha ama badda, xeebta, jimicsiga.
Bacda Qashin Dheelaanka Kiimikada Qashinka ee Neefta Dabiiciga ah
Tayada sare: Bacda lagama maarmaanka u ah safarka waxay ka kooban tahay pelon tayo sare leh, biyo-celin iyo waara, fududahay in la nadiifiyo, dib loo isticmaali karo, bay'ad u fiican, nolosha adeegga oo dheer, kaydinta kaamil ah ee qurxinta, ayaa ah bedelka ugu habboon ee bacaha balaastigga ah.
Boorsada lagu qurxiyo boorsada la isku qurxiyo ee safarka boorsada lagu qurxiyo boorsada dharka lagu qurxiyo
Bacda qurxinta ma aha oo keliya bacda dharka lagu dhaqo, laakiin waxay sidoo kale tahay bac qurxinta, bac bakhaar, iwm. Boorsada safarka oo leh adeegsi fara badan. Waxay ka kooban tahay walxaha polyester-ka jawiga ku fiican oo tayo sare leh, qoyaan-caddeyn ah, biyo-celin, ayaa si fiican u ilaalin kara alaabtaada, aadna u fudud in la nadiifiyo.
Boorsada dharka lagu qurxiyo ee pvc dharka la isku qurxiyo ee la qaadan karo kiimikada xeebta lagu qurxiyo
Boorsooyinkayaga nadiifinta hufan waxay ka kooban yihiin agab tayo sare leh oo leh PVC, waxay leeyihiin iska caabin heer sare ah, biyo iska caabin ah, iska caabin aad u sareysa cayayaanka, fangaska, xayawaanka iyo caaryada, caaryada, qurunta iyo kiimikooyin fara badan, waxay ku siin karaan khibrad isticmaalka muddada-dheer.